FAQs - Ningbo Everfine plastika Co., Ltd
Kaopy, kaontenera, Takelaka, vilia baolina
lovia kely Straws
Fonon-tanana & New Arrivals
Ny vidin-javatra dia manaiky hozakain'izy fiovana ara-nofo mikasika ny manta sy ny tsena vola antony. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra araka ny orinasa mifandray anay Raha mila fanazavana fanampiny
Eny, mitaky isika rehetra, fara fahakeliny, mba worths $ 1000, ary be ho an'ny zavatra tsirairay hatramin'ny 100,000pcs.
MAZAVA HO AZY. Manana mafy R & D ekipa, ny vokatra mety ho fomba amam-panao-natao mba hifanaraka ny fepetra manokana.
Iza moa ireo orinasa lehibe / mpanjifa lehibe indrindra eto amin'ny firenentsika / regiorr?
Manana tena be dia be ny mpanjifa maneran-tany, nefa tsy afaka manambara bebe kokoa momba ny vaovao tsiambaratelo.
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana noho ny santionany farany kalitao & zavakanto design.In toe-javatra rehetra isika, dia hiezaka mitovy ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
T / T. 30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L.
D / P nahita (antontan-taratasy fandoavam-bola manohitra fahitana).
O / A 60 andro (misokatra tantara) amin'ny tsara indrindra ho mendri-pitokisana indrindra mpanjifa.
Manome antoka fa isika rehetra fitaovana ampiasaina amin'ny fonosana plastika sy ny fanodinana sakafo no kilasy. Araka ny BSCI, Sedex mpikambana nirotsaka, BRC, GMP, IS022000, HACCP voamarina orinasa, isika committedto manome kalitao ny vokatra, mandritra izany niresaka sy handaminana olana rehetra eo amin'ny fangatahana kalitao.
Manome antoka ve ianao azo antoka sy tsy manana ahiahy ny mpanjifa 'lasitra vola?
Raha misy lasitra mpanjifa mampiasa vola isika, dia hanaja sy hiaro ny tombontsoany fototra sy IPR (Intellectual Property Rights), ny lasitra manokana dia tsy ampiasaina amin'ny hafa any amin'ny toerana hafa ny baiko.
Fa santionany-manaiky, fandefasana entana saram Miovaova arakaraka ny $ 40 ho $ 80.
Fa LCL sy FCL entana, fandefasana entana saram miankina amin'ny voafidy INCOTERMS sy forwarders.
Dia hanatrika ny 122th Canton Fair